AMISOM oo is hor istaag ku sameeyay diyaarad ku wajahneed Buula Burde | KEYDMEDIA ONLINE
AMISOM oo is hor istaag ku sameeyay diyaarad ku wajahneed Buula Burde
Ciidamada AMISOM ayaa sheegay in maalinta Jimcaha ay shaqada ka nastaan, islamarkaana aan garoonka la fureynin.
MUQDISHO, Soomaaliya - Ciidamada AMISOM gaar ahaan kuwa Jabuuti ee ku sugan magaalada Buula Burde ee gobolka Hiiraan ayaa diiday diyaarad maanta oo Jimcaha ka degi laheyd Buula Burde, si ay u soo qaado Haweeney halkaas ku xanuunsaneyso.
Qaar kamid ah ehelada Haweeneyda xanuunsan ayaa Keydmedia Online u sheegay in qofka xanuunsan ay tahay Hooyo xaamilo ah islamarkaana ay la xanuunsaneyso xanuunka kalaamisada waxaana loo dalbay diyaarad yar oo qaada 12 qof.
AMISOM ayaa sheegtay in Jimcaha ay nastaan islamarkaana aysan ogoleen in wax diyaarad ah garoonka ka soo degto.
Duulimaadyada caadiga ah ayaa Buula-barde aada laba jeer todobaadkiiba, halka maalmaha kale ee loo baahdana ay ka dagi karto basle AMISOM waxey sheegeen in aysan Jimcaha furi karin shaqada Garoonka xaalad kasta oo jirta.
Qaar kamid ah ganacsatada magaalada Buula-barde oo arintaan isu xil saaray ayaa dowladda Soomaaliya ka dalbaday in ay soo farogeliso dhibaatada ka taagan Buula-barde, lana bad baadiyo hooyada xanuunsan.